के तपाई ह्यान्डसम र जवान देखिन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»के तपाई ह्यान्डसम र जवान देखिन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
By मनिषा थापा on २२ बैशाख २०७५, शनिबार ११:५३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
पिएनपिखबर, भक्तपुर : सबै युवाहरु सधै ह्यान्डसम र स्मार्ट देखिन चाहन्छन। यसकारण बजारमा पाउने विभिन्न खालको क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्छन जसले स्वास्थ्य र अनुहारको छालामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। बजारमा पाउने क्रिममा केमिकल पर्याप्त हुने गर्छ जुन तपाईको स्वास्थ्य र छालाको लागि निकै हानिकारक हुन सक्छ।
आज हामी तपाईलाई एक यस्तो घरेलु उपायको बारेमा बताउन गईरहेका छौ जसको प्रयोगले तपाईको ह्यान्डसम र स्मार्ट बन्ने चाहाना पुरा हुनसक्छ।
– मात्र यी तीन चीजको सहि तरिकाको उपयोगले अनुहारमा चमक ल्याउनेछ।
यसरी गर्नुहोस प्रयोग :
एउटा कचाउरोमा २ ग्राम बेसार राख्नुहोस त्यसमा ५० ग्राम मह हालेर राम्ररी चलाउनुहोस। अब यस पेस्टलाई नियमित रूपमा बिहान खाली पेटमा खानुहोस त्यसपछि एक गिलास दूध पिउने गर्नुहोस। लगातार ३० दिनसम्म बेसार र महको सेवन गर्नाले तपाईको अनुहार र शरीरमा प्राकृतिक निखार आउनेछ। यस कुराको ध्यान राख्नुहोस कि यो खाने समयमा धेरै तेल र मसालेदार खानेकुरा नखानुहोस।